ब्लग लेखनले गर्दा युएईमा हुने पत्रकारहरूको कार्यक्रममा मलाई पनि निम्तो आउँछ-क्रिशोल पौडेल - MeroReport
ब्लग लेखनले गर्दा युएईमा हुने पत्रकारहरूको कार्यक्रममा मलाई पनि निम्तो आउँछ-क्रिशोल पौडेल
कास्की जिल्लाको सदरमुकाम तथा सुन्दर पर्यटकीय नगरी पोखराको काँठका स्थायी बासिन्दा हुन् क्रिशोल पौडेल । कामको खोजीमा पाँचबर्ष अघिदेखि हालसम्म विदेशमा नै बसोबास गरिरहेका उनी नेपालमा छउन्जेल सुचना प्रविधिका क्षेत्रमा कृयाशिल थिए । सुचना प्रविधि राम्रो आम्दानी हुने पेशा भनिए पनि बिदेश किन जानुपर्‍यो त भन्ने सन्दर्भमा क्रिशोल भन्छन्-' नेपालमा काम गरेर पैसा कमाएर ब्या गरौला भनेर कुर्ने हो भने जिन्दगीभरी ब्रह्मचारी बस्नुपर्ने देखियो, त्यही बेलामा दुबईबाट आफ्नै पेशाको अबसर आयो अनि यता आएर काम गर्दैछु।' निरन्तर ब्लगिङमा सक्रिय क्रिशोल सोसल मिडियाका अन्य प्लेटफर्महरु फेसबुक ट्विटर लगायतमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । अँझ रमाईलो कुरा त निरन्तरको ब्लगिङकै कारण दुबईमा हुने सार्वजनिक महत्वका कार्यक्रमहरुमा समेत उनलाई पत्रकारकै भुमिकामा निम्त्याईदोरहेछ ।
मेरोरिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरका निम्ति यसपटक हामीले उनै ब्लगर क्रिशोल पौडेलसंग जिमेल र फेसबुक मार्फत कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको अँश :
कुराकानी सुरु गरौँ, नेपालमा घर कहाँ हो क्रिशोलजीको?
आफ्नो घर छैन, बाको घर पोखराको काँठमा पर्छ ।
कति भो दुबई बस्न थाल्नुभएको?
बिगत पाँच बर्षदेखी यता आएर काम गर्दैछु।
सोसल मिडियाको एउटा साधारण युजर अनि मुडी ब्लगर भन्न रुचाँउछु।
तपाँइको ब्लग http://krishol.com.np/ का बारेमा बताइदिनुस त अलिकति, कस्तो ब्लग हो र यहाँ तपाँइ कस्ता कुराहरु अभिब्यक्त गर्नुहुन्छ?
विदेशिय पछी मान्छे कवि र लेखक हुदो र’च, म पनि त्यसैको शिकार भएँ । :D यो मेरो नितान्त ब्यक्तिगत विचार र अनुभवहरूको ब्लग हो। यस्तो त्यस्तो भन्ने छैन, मनमा आएका विचारहरू ब्लगमा राख्न लायकका छन भने राख्दिन्छु।
तपाँइ सोसल मिडियामा निकै सक्रिय हुनुहुन्छ । करिबकरिब ३३ हजार त ट्विट मात्रै गरिसक्नुभएछ । सामाजिक संजालमा आफू रहनुका पछाडि मुख्य कारण या आकर्षण के हो झैँ लाग्छ यहाँलाई?
सन् २००८ देखि ट्विटर चलाउन थालेको हुँ, सुरूदेखि नै रमाईला साथीहरू भेटिए ट्विटरमा अनि त ट्विटको संख्या ३३ हजार हुने नै भयो नि । सामाजिक संजालमा रहनुको मुख्य कारण चाँही छिटो भन्दा छिटो सुचना/समाचारमा पहुँच नै हो।
सोसल मिडियाका कुनकुन प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ?
साईनअप त थाहा पाएजति सबैमा गरेको हुँला तर सक्रियता चाँही फेसबुक, ट्विटर र ईन्स्ट्राग्राममा छ। ट्विवटरमा चाँही “उग्र सक्रिय” छु :D
हुन त सोसल मिडियाले मानिसको ब्यक्तित्वलाइ चम्काएको छ, सम्बन्धको दायरा फराकिलो पारेको छ, सम्बन्ध र सहयोग आदानप्रदान समेत भइरहेको छ तर पनि यसलाई अश्लिलता र छाडा कुरा गर्ने माध्यम भनेर पनि आलोचना गर्छन नि मान्छेहरु। यस बारेमा के भन्नुहुन्छ यहाँ?
मेरो बिचारमा सोसल मिडिया भनेको खाली चौर हो, यसमा तपाईले के बनाउने त्यो तपाईको ब्यक्तिगत इच्छा हो, कसैले घर बनाएका छन्, कसैले टावर बिल्डीङ बनाएका छन्, कसैले रत्नपार्क बनाएका छन् त कसैले शौचालय बनाएका छन्।
अब तपाँइको ब्लगको कुरा गरौँ, तपाँइको ब्लगमा एकाध अँग्रेजी बाहेक अधिकाँश नेपाली भाषामा लेखिएका ब्लगपोष्टहरु रहेछन्। खासमा यहाँको ब्लगिङको रुची के हो? लेख्ने बिषयबस्तु दुबैका बारेमा भन्नुपर्दा?
सर्बप्रथम त भाषाको कुरा गर्दा, नेपाली भाषा मलाई भात जस्तै लाग्छ, जति केएफसी र म्याकडोनल्स् खाए’नि दिनभरी पेटमा भात परेन भने उकुसमुकुस हुन्छ। त्यस्तै, बिदेशमा छु, बोलीचालीमा हिन्दी अथवा अंग्रेजी बढी प्रयोगमा आउँछ । नेपाली पनि बोलिन्छ तर लेख्ने ठाँउ चाँही कतै छैन, नेपालीमा ब्लग लेख्दा आफ्नोपनको आभाष आउँछ, त्यसैले नेपालीमै लेख्न रुचाउँछु तर शुद्दाशुद्दी चाँही उति ख्याल गर्दिन। ;)
यहाँले कसलाइ लक्षित गरेर ब्लग लेख्ने गर्नुहुन्छ?
यो त्यो भनेर रिडर सेगमेन्ट छुट्याएको छैन। नियमित लेख्दा पनि लेख्दिन, लेख्छु भनेर पनि लेख्दिन, जुन दिन मनमा बिचारहरू फुरेर आउँछन्, समय छ भने लेखिहाल्छु र ब्लगमा पोष्ट गर्न लायकको छ भने पोष्ट गर्छु। समय छैन भने त्यो त्यत्तिकै तुहिएर जान्छ ।
ब्लग बाहेक ट्विटरमार्फत माइक्रो ब्लगिङमा पनि उत्तिकै लागि पर्नुहुन्छ । ट्विटरमा कहिलेदेखि प्रवेश गर्नुभयो र यहाँलाइ लेख्न मन लाग्ने सवालहरु के हुन?
सन् २००८ देखि ट्विटर चलाउन थालेको हुँ। ट्विटरमा यो नै भनेर धार त छुट्याएको छैन तर सामाजिक चासोका बिषय र सुचना प्रविधिको बारेमा ट्विट गर्न मन पराउँछु ।
फेसबुकको उपभोक्ताका हिसावले चाँही आफुलाई कत्तिको सक्रिय उपभोक्ता मान्नुहुन्छ?
पहिला साह्रै नै सक्रिय थिएँ, एकदिन स्टाटस राखिन भने के नपुगेको के नपुगेको जस्तो हुन्थ्यो, एक दुई घन्टामा नोटिफिकेसन देखिएन भने त छट्पटिनै हुन्थ्यो । अहिले चाँही धेरैजसो “रिड वन्ली” मोडमा हुन्छु, अहिले त दिनमा एक दुईटा नोटिफिकेसन देखिन्छन् त्यो पनि क्यान्डिक्रसको रिक्वेष्ट वाला :D समग्रमा भन्नुपर्दा अचेल आएर फेसबुकमा रमिते जस्तो भएको छु ।
सोसल मिडियाका प्राय सबै प्लेटफर्मको उपभोक्ताका हिसावले भन्दा माइक्रो ब्लगिङ र ब्लगिङमा के फरक रहेछ त खासमा?
माईक्रो ब्लगिङलाई कुनै रुप/जीवन दिनु जरुरी छैन तर ब्लग चाँही एउटा ठोस बिषयमा केन्द्रित भएर लेखिन्छ, यसलाई रुप र जीवन दिन जरुरी छ ।
केहीको मुखबाट मैले सुनेको छु 'कि माइक्रो ब्लगिङ भनेको फाष्टफूड हो भने ब्लगिङ चाँही पकाएर खानुपर्ने खाना । अचेल मानिस फाष्टफूडको चक्करमा खाना पकाएर खानै छाड्न थालेको छ जव कि फाष्टफूड कतिपय अवस्थामा स्वास्थ्यका निम्ति प्रतिकुल पनि हुन्छन् ।' यस बारेमा के भन्नुहुन्छ यहाँ । कतै तपाँइ पनि फाष्टफूडमै रमाइरहनुभएको त हैन?
अवश्य पनि सही कुरा हो र केही हदमा म पनि फाष्टफुडमै रमाईरहेको छु । यसको फाईदा बेफाईदा दुबै छन्। माईक्रो ब्लगिङ नभएको भए मेरा कति बिचारहरू त्यसै तुहिएर जाने थिए।
२००८ मा नेपालबाट पलायन भएदेखि लेख्न थालेको हुँ, तर ब्लग नै भनेर चाँही २०११ बाट सुरु गरेको हुँ ।
कसरी र किन ब्लगिङ सुरु गर्नुभयो?
सुरुमा फेसबुक नोटमा लेखेर लाईक र कमेन्ट गन्ने गरिन्थ्यो ;) सन २००६ देखि नै आफ्नो नामको डोमेन लिएर राखेको थिएँ। फेसबुकमा भन्दा आफ्नै डोमेनमा ब्लग चलाउँदा ठिक होला जस्तो लागेर २०११ मा यसलाई ब्लगको रुप दिएँ।
केका लागि ब्लगिङ गर्नुहुन्छ?
आत्मसन्तुष्टिका लागी ।
कस्ता बिषयबस्तु तपाईंको ब्लगमा प्राथमिकतामा पर्छन् र किन?
यस्तो त्यस्तो भन्ने नै छैन। शब्द फुर्नुपर्छ, जे मनमा आउँछ, लेख्छु। ब्लगमा राख्न लायकको छ भने राखिदिन्छु। हैन भने लुकाएर राख्छु। ;)
मानिसहरु ब्लगिङ गर्न रहर त धेरै नै गर्छन, तर निरन्तर ब्लग गरिरहन या ब्लगलाइ समय दिन त गाह्रो छ नि है? यहाँले पनि रुची हुँदाहुँदै ब्लग अपडेट गर्न नभ्याउनुभएको पनि छ कि?
म आफ्नो आत्मसन्तुष्टिका लागी मुड चलेको अनि समयले साथ दिएको बेला लेख्छु त्यसैले २–३ महिनामा एउटा ब्लग लेखेँ भने पनि लेख्न भ्याईन भन्ने चाँही लाग्दैन।
ब्लगिङ बाहेक तपाँइको अर्को रुचीको बिषय चाँही केहो?
घुमफिर र भेजिटेरियन खाना बनाउने।
उसोभा तपाँई शाकाहारी?
हैन, माँशाहारी खाना मिठो बनाउन त्यत्ति नआएकाले । ;)
सोसल मिडियाको सक्रिय उपयोगकर्ताका नाताले भन्दा, नेपालमा सोसल मिडियाको प्रयोग कस्तो भइरहेको पाउनुभएको छ?
हर हिसाबले प्रयोग भएको छ। तर मुख्यतया साथीभाईको खबर होस् या देश बिदेशको खबर, सुचनाको श्रोतकै हिसाबले प्रयोग भएको पाएको छु।
अनि नेपाली ब्लगिङको प्रयोगलाइ कसरी हेरिरहनुभएको छ? सदुपयोग या दुरुपयोग?
साधरणतया त सदुपयोग नै भएको देखेको छु तर एक दुईवटा 'नाम चलेको भनिएका' ब्लगहरूले पाठकको भावनालाई क्यास गर्न खोजेको देख्दा चाँही दुरुपयोग पनि भएको छ जस्तो लाग्छ।
तपाँई विदेशमा बसेर नेपाली भाषामा ब्लगिङ गरिरहनुहुन्छ र सन्दर्भ पनि नेपालकै उठाईरहनुभएको भएको हुन्छ । तर डायस्पोराका नेपालीहरुका सन्दर्भ भने त्यत्ति उठ्दैनन नि किनहोला?
नेपाली भाषामा ब्लग गर्नुको कारण त अघि नै भनिहालेँ । नेपालको या बाहिरको भन्ने छैन मलाई जुन बिषयले छुन्छ, लेख्ने मुड चल्छ, लेख्छु । मैले अरू ठाँउमा रहेका नेपालीको बारेमा त लेखेको छैन तर युएईमा रहेका नेपालीहरूको बारेमा भने केही ब्लगहरू लेखेको छु ।
अरुका ब्लग कत्तिको पढ्नु हुन्छ? प्राय: पढने ब्लगहरु?
ब्लग खोज्दै जाँदिन, ट्विटर र फेसबुकमा सेयर भएका र शिर्षक आकर्षक खालका छन् भने पढ्छु। नेपाली ब्लगरहरूमा @anantabrt @aakarpost @sahiladai @gwaach @brnpkrl @bhalaadmi को ब्लगहरू चाँही सकेसम्म छुटाउँदिन ।
टेक्नोलोजी सम्बन्धी र ब्यक्तिगत अनुभब समेटिएका ब्लगहरू पढ्न रुचाँउछु।
आफ्ना ब्लगपोष्ट ब्लगमध्ये सबैभन्दा मन परेको ब्लग कुन हो तपाँईको?
म आफैलाई मन परेको चाँही, ईतिश्री: ग्लोबल भिलेज २०१० भ्रमण, ससुरा बालाई चिठी र फस्ट लभ हो ।
छैन, आकासमा उड्ने चरालाई सिन्डिकेट प्रणालीमा रुट दिएर त्यही रुटमा उड् भन्या जस्तै हो ब्लगरलाई आचारसंहिता ।
अरुका ब्लगहरु हेर्दा आचारसंहिता पालना भएको या जिम्मेवारीपुर्वक लेखिएको कत्तिको पाउनु भएको छ त?
म आचारसंहिता होईन जवाईदेहितामा विश्वास राख्छु, म कुनै आचारसंहिता पालना गर्दिन र अरुले गरेको छ कि छैन भनेर पनि हेर्दिन।
त्यस्तो खास घटना त छैन तर यही ब्लग लेखनले गर्दा युएईमा हुने पत्रकारहरूको कार्यक्रममा मलाई पनि निम्तो आउँछ । :D
सोसल मिडियामा पनि उत्तिकै सक्रिय भएका नाताले भन्दिनुस् न, हामीकहाँ प्रयोगमा आइरहेका सोसलमिडियाका थलोहरु: ब्लग, ट्वीटर र फेसबुकमा के फरक पाउनुभयो?
ब्लग: आफ्नो कुरालाई चिरिच्याट्ट पारेर, फुलबुट्टा भरेर लेख्ने ।
टिवटर: झ्वाट्ट आएको बिचारलाई फ्याट्ट लेखिहाल्ने । सुचनाको सबै भन्दा पहिलो श्रोत ।
फेसबुक: साथीभाईको अपडेट लिने ठाँउ । सुचनाको अर्को मुख्य श्रोत ।
छन तर एकदम न्युन ।
ब्लगिङलाइ कहिँकतै बैकल्पिक मिडिया अर्थात आफ्ना कुराहरु आफ्नै तरिकाले अभिब्यक्त गर्ने थलो र ब्यक्तिको निजी मिडियाका रुपमा पनि भन्ने गरेको पाइन्छ तर पनि यो अँझै टाँठाबाठा र बोल्ने थलो पाउनेहरुको पहुँचमा मात्रै सिमित छ पनि भनिन्छ नि, किन होला?
टाँठाबाठा भन्दा पनि प्रबिधिको पहुँच र ईन्टरनेटमा बानीपरेकाहरूमा सिमित छ भन्दा ठिक होला ।
नागरिक पत्रकारिता “नै” त होईन तर नागरिक पत्रकारिता “पनि” हो ।
तपाईहरुको फलोस् फुलोस् । ;)
Comment by Lava Kafle on September 2, 2013 at 8:07am
Comment by Prakash Lamichhane on August 27, 2013 at 11:15am
Congratulations Krishol ji :)